Google Sheets ndechimwe chezvishandiso zvakanakisa zvaunogona kushandisa kuchengetedza data, kutevedzera maitiro ekuita, uye kugadzira madhibhodhi nemishumo. Asi kunyangwe chiri chishandiso chinoshamisa chine zvisingaverengeki maficha uye mashandiro, zvinogona kunetsa kubata kune vanotanga - kunyanya kana iwe uchida kugadzira chirevo chekushambadzira kana dashboard, nekukurumidza. Kwete kunetseka. Kana uri kutsvaga kutanga neGoogle… [Verenga zvakawanda ...] nezve The Ultimate Guide kuGoogle Sheets
Maitiro ekushandura Date Format muGoogle Sheets uye Excel Online
Kunyangwe Google Sheets neExcel Online ari maviri eakanakisa emahara epamhepo epamhepo editing maspredishiti, unogona kusada mamwe maficha awo. Semuenzaniso, iyo date format. Kana iwe usingade kushandisa iyo yakafanotaurwa zuva kana nguva fomati, unogona kuzvishandura muGoogle Sheet uye Excel Online. Kuti uwane ruzivo, haufanire kushandisa yekuwedzera-kana chero imwe yechitatu-bato sevhisi… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro ekushandura Date Format muGoogle Sheets uye Excel Online
Maitiro Ekuchengetedza kana Kuburitsa Chati Kubva kuGoogle Sheets
Paunogadzira girafu muGoogle Sheets, ungangoda kuishandisa kunze kweiyo spreadsheet. Unogona kuchengeta chati zviri nyore kana kuishambadza kuwebhu kuitira kuti ugoishandisa kumwe kunhu kana kuigovera. Unogona kunge uine pie chati inoratidza kuwedzera kwemari, chati yesangano ine chimiro chekambani yako, kana mutsara wechati inoratidza kutengesa munzvimbo dzese. Unogona kudhawunirodha chati ku… [Verenga zvakawanda ...] nezve Machengetero kana Kuburitsa Chati Kubva kuGoogle Sheets
Kana zvasvika pakupinza dhata kubva kuMicrosoft Excel kuenda kuGoogle Sheets uye zvichipesana, vazhinji vedu tinozviita nekurodha faira reExcel kuGoogle Drive uye kurodha maGoogle Sheets muMicrosoft Excel fomati, kana nekungokopa nekuisa data. Iyo inguva-inopedza nguva, sezvaunofanirwa kuzviita pese paunochinja chero kuExcel faira kana Google Sheets. … [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro eKutumira kunze kana Kupinza Data kubva kuExcel kuenda kuGoogle Sheets